Hunhu hunhu hweanogadzirira kuronga timu
Kuru Agile Hunhu hunhu hweAgile Kuzvirongedza Chikwata
Hunhu hunhu hweAgile Kuzvirongedza Chikwata
Chimwe chezvakakosha zvakakosha zvekubudirira kweAgile setup ndeyekuzvironga-timu. Izvi zvinotaurwa zvakare mu Agile pachena :
' Iwo akanakisa mapurani, zvinodiwa, uye dhizaini zvinobuda kubva kuzvikurongera-zvikwata '
Zvikwata zvekuzvironga-wega, sezita zvarinoreva, tora mutoro uye maneja kwavo mabasa uye usavimba nemombe yekuvaudza zvekuita.
Ngatione izvo zvakajairika kuzvironga-yega timu yeAgile inoita senge:
Muridzi: Kazhinji boka iri iboka revanhu vakura vanotora matanho uye vanozvishandira uye havamiriri mutungamiri wavo kuti ape basa. Izvi zvino chengetedza pfungwa hombe yekuva muridzi nekuzvipira.
Kukurudzira: Kukurudzira kwechikwata ndiyo kiyi yekubudirira. Nhengo dzechikwata dzinofanirwa kutarisa uye kufarira basa ravo.
Kubatana: Chikwata chinogona kubata ravo basa zvine chekuita nekupihwa basa, fungidziro yebasa, kusimudzira nyaya uye kuyedza uye kuendesa yakabudirira Sprint seboka. Ivo vanofanirwa kushanda sechikwata kwete seboka revanhu. Kushandira pamwe kunokurudzirwa.
Kudzidzisa: Chikwata chakasara kuti chiite zvavanogona - kuendesa software - asi zvichiri kuda imwe nhanho yekupa mazano uye kudzidzisa nekufambisa neScrumMaster yavo, asi havadi 'kuraira nekutonga.'
Kuvimba uye kuremekedza: Nhengo dzechikwata dzinovimbana nekuremekedzana. Vanotenda mukutora kodhi muridzi uye kuyedza uye vakagadzirira kuenda mamaira ekuwedzera kuti vabatsirane kugadzirisa nyaya.
Kuzvipira: Kutaurirana uye zvakanyanya kukosha vakazvipira vanhu kwakakosha mune yega-kuronga Agile timu. Nhengo dzechikwata dzinotaurirana zvakanyanya kune mumwe nemumwe, uye vakazvipira zvizere kuendesa mabasa avo mumwe nemumwe uye seboka. Kune akasiyana maScrum mhemberero senge yemazuva ese musangano wekumira-kumusoro, kurongedza nyaya uye pairing, iyo inokurudzira hurukuro dzechikwata.
Kubatana: Chikwata chinonzwisisa kuti kuendesa software zvinobudirira, vanofanirwa kunzwisisa zvinodiwa uye havatye kubvunza mibvunzo kuti kusava nechokwadi kwavo kujekeswe. Kubatira pamwe nguva dzose ne Chigadzirwa Muridzi zvakakosha.
Kukwanisa: Vanhu vamwe nevamwe vanofanirwa kuve vanokwanisa kuita basa riripo. Izvi zvinoguma nekuzvivimba nebasa ravo uye zvichabvisa kudiwa kwenhungamiro kubva kumusoro.
Kuvandudza: Kuenderera mberi nekuvandudza hunyanzvi hwavo uye kukurudzira mazano ekuvandudza nekuvandudza.
Kuenderera mberi: Chikwata chitsva chinotora chinguva kuti chikure uye kuve chakazvirongedza. Kuwedzeredza nguva, vanogona kunzwisisa mashandiro avo sechikwata, nekudaro kuchinja kuumbika kwavo nguva nenguva hakuzobatsiri. Zviri nani kuve nenhengo dzechikwata dzinoshanda pamwe kwenguva yakareba.
Kugadzira yega-inoronga timu muAgile harisi basa riri nyore uye inotora inonzwisisika nguva yekuumba. Kazhinji, iyo ScrumMaster inofanirwa kudzidzisa uye kuendesa chero epamusoro zvigadzirwa kuti ibatsire nekukasira-kuumba kuumbwa kweakazvirongedza matimu eAgile.
girazi dema vs pakati pehusiku nhema
Java bvisa faira kana riripo
Galaxy S7 inogona kuuya ne microSD slot, S7 kumucheto ine kumusoro-kusvika-pasi yakakomberedzwa kuratidza
iPad Pro 2021 mutengo, madhiri, kupi kwekutenga
Maitiro ekuvharira vasingazivikanwe vanofona pane Samsung Galaxy S20 5G
Facebook inogona kunge iine mukwikwidzi weApple Watch mumabasa: Modular dhizaini, $ 400 mutengo weti
LG Phoenix Plus ndiyo nyowani nyowani yeAT & T Inobhadharwa foni, Android Oreo uye chigunwe chigunwe scanner mubhodhi
Vanotora nguva yakareba sei vanochengeta data rako?
Java Tora Razvino Zuva Nguva
Maitiro ekuchinja mavara ekuzivisa efoni yako & apos; s mwenje wechiedza